Chimwe chezvinyorwa zvakagovaniswa zvatakambonyora zvaive pane izvo analytics uye mhando dzematurusi maturusi anowanikwa kubatsira vashambadzi kuongorora mashandiro avo, kuongorora mikana yekuvandudza, uye kuyera mhinduro uye maitiro evashandisi. Asi ndeapi maturusi ari kushandiswa nevashambadzi? Zvinoenderana neongororo ichangoburwa yeEconsultancy, Vashambadzi vanoshandisa webhu analytics zvakanyanya, kozoti Excel, zvemagariro analytics, mobile analytics, A / B kana multivariate kuyedza, zvinehukama dhatabhesi (SQL), mapuratifomu ehungwaru ebhizinesi, tag manejimendi, mhinduro yekupa, mushandirapamwe,
Pakave nekumwe kutaura pamablog maererano nehukuru hwepakati peiyo WordPress posvo. Imwe mwenje yakaburitswa kuti Injini dzekutsvaga dzinongoyera kukanganisa kweiyo yekutanga x nhamba yemavara, uko x isingazivikanwe parizvino. Nekuda kweizvozvo, chero chinhu mushure meizvozvo kungori kutambisa mazwi. Mufananidzo kubva kuna Wordle! Ini ndiri nani garrulous nemablog angu zvinyorwa saka ini ndave kuzoita imwe yekuwedzera ongororo uye ndione kana kufarirwa kwe
Ndichiri kushanda purojekiti yeGoogle Mapping vhiki ino, ini ndaida kugadzira tafura muMySQL iyo yakashandura nyika mbiri-manhamba uye zvirevo zvehurumende kuzita rakazara. Ndine chokwadi chekuti ichi chinhu chinodiwa zvishoma, saka ndaisa iyo SQL faira kumusoro kwangu server kurodha pasi. Hechino chirevo cheQLC cheHurumende nePurovhosi Mifananidzo yekuUnited States neCanada. Ini ndakawedzerawo Index pane ese ari mairi